Diyaarad nooca loo yaqaan Prototype ayaa ku burburtay dalka Ruushka oo ay ku dhinteen dhammaan dadkii saarnaa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Diyaarad nooca loo yaqaan Prototype ayaa ku burburtay dalka Ruushka oo ay ku dhinteen dhammaan dadkii saarnaa
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • News • Wararka Ruushka • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Diyaaradda ayaa ku seegtay halka ay ka degto 1.5 kiiloomitir (0.9 mayl) waxayna ku qaraxday markii ay isku dhaceen dhulka.
Diyaarad ayaa ku burburtay meel u dhow Moscow.
Diyaarad cusub oo gaadiid militari oo Ruush ah ayaa gubtay oo burburtay duulimaadkii ugu horreeyay.
Ma jirto cid ka badbaaday shilka diyaaradda Moscow.
Diyaarad cusub oo kuwa rakaabka ah oo Ruushku leeyahay ayaa burburtay intii ay ku jirtay duulimaad tijaabo ah iyada oo isku dayday inay isku daydo inay ku degto saldhigga cirka ee Kubinka oo ku yaal meel ka baxsan Moscow, halkaas oo ay ku dhinteen dhammaan saddexdii qof ee saarnaa.
Diyaaradda ayaa ku seegtay xariggii soo degidda 1.5 kiiloomitir (0.9 mayl) waxayna ku qaraxday markii ay isku dhaceen dhulka.
Sida xogta hordhaca ah lagu sheegay shilka ayaa ka dhashay dab ka kacay matoorka garabka midig ee diyaaradda.
Soosaaraha diyaaraddan, United Aircraft Corporation, ayaa xaqiijisay shilka, isagoo sheegay in ka hor inta aysan diyaaraddii nooca ahayd aysan dhicin, matoorka saxda ah ee diyaaradda ayaa gubtay, taasoo keentay in Il-112V uu u janjeero dhinaca midig. Diyaaraddu waxay bilowday inay lumiso xawaaraha ka hor inta aysan ka rogin oo ku dhicin dhulka u dhow Saldhigga hawada ee Kubinka.
Shirkadda diyaaradaha ee United Aircraft Corporation (UAC) ayaa sheegtay in diyaaradda ay wadeen duuliye sare oo ka tirsan Shirkadda Diyaaradaha ee Ilyushin, duuliyihii tijaabada 1-aad, Geesigii Ruushka Nikolai Kuimov, duuliyihii imtixaanka heerka 1-aad Dmitry Komarov iyo Injineerkii duulimaadka ee fasalka 1-aad Nikolai Khludeyev .
Rostec, oo ah shirkadda waalidka ee United Aircraft Corporation, ayaa ku dhawaaqday inay abuuri doonto guddi baara shilka, iyadoo xustay inay weli ku jirto heer tijaabo ah.
Sida laga soo xigtay ilo ka tirsan hay'adaha sharci fulinta, meydadka dhammaan saddexdii shaqaale ee diyaaraddii ugu dambeysay ee Ilyushin Il-112V ee Ruushka ayaa la helay.
Ilaha warshadaha duulista ayaa sheegay in shaqaalihii diyaaradda lyushin Il-112V ay isku dayayeen inay badbaadiyaan diyaaradda ilaa daqiiqaddii ugu dambaysay waxayna ka duuliyeen diyaaradda dhismayaal la deggan yahay.